Ciyaartoyda Kooxda Arsenal Ma Ku Raaceen Go'aanka Kooxdu Ka Soo Saartay Dhankii Mushahar Dhimista? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxda Arsenal ayaa si rasmi u soo saartay warbixin ay ku faah faahisay heshiis buuxa oo ay ciyaartoyda kooxdeeda kala gaadhay mushaar dhimistii uu dadaalka badani ku soo baxay waxaana lagu dhawaaqay nooca heshiiska la sameeyay.
War rasmi ah oo ay Arsenal soo saartay ayaa lagu xaqiijiyay in dhamaan ciyaartoyda kooxda kowaad, shaqaalaha tababarka oo uu Mikel Arteta ugu horeeyaa ay go’aan rasmi ah ku gaadheen in ay sameeyaan mushaar dhimis boqolkiiba 12.5 ah.
Maamulka Arsenal ayaa ku guulaystay in ay meel mariyaan qorshihii shanta qodob ayaa ee ay hore ciyaartoyda kooxda kowaad uga gadooday waxaana hadda la gaadhay heshiis rasmi ah oo mushaar dhimis ah.
War saxaafadeedka ay Arsenal soo saartay ayaa lagu yidhi: “Waxaanu ku faraxsanahay in aanu ku dhawaaqno in aanu heshiis la gaadhnay ciyaartoydayada kooxda kowaad, tababaraha iyo shaqaalaha muhiimka ah ee tababarka si ay kooxda waqtigan adag u caawiyaan”.
mushaar dhimista ay Arsenal kooxdeeda ka samaysay ayaa lagu yidhi: “Dhimista mushaarka sanadkii ee boqolkiiba 12.5% waxay dhaqan galaysaa bishan iyada oo shaqada waraaqaha la dhamaystiri doono maalmaha soo socda”.
“Haddii aanu bartilmaameedyo gaar ah gaadhno xili ciyaareedka soo socda oo la xidhiidha guulaha garoonka dhexdiisa, waxay kooxdu dib u bixin doontaa tiradan.(12.5% ka la dhimay). Lacagahaas dib ayaanu bixin doonaa haddii aanu gaadhno bartilmaameedyadaas iyada oo ciyaartoydu si toos ah u saamayn karaan, waxay la micno tahay in booskayaga dhaqaale uu ahaan doono mid xoogan” ayaa qoraalka Arsenal la sii raaciyay.
Waxaa warka Arsenal lagu sheegay in heshiiska mushaar dhimista ciyaartoyda iyo shaqaaluhu uu ku salaysan yahay iyada oo xisaabta lagu darsaday in xili ciyaareedkan inta ka hadhay la dhamaystiri doono oo la heli doono lacagta baahinta tooska ah oo dhamaystiran.
“Heshiiskani waxa uu ku salaysan yahay qaadashada in xiil ciyaareedkan 2019/2020 la dhamaystiri doono oo la heli doono dakhliga baahinta oo dhan. Natiijada dhigaaladu waxay caawin doonaan halisaha dhaqaale ee aanu xili ciyaareedkan soo maray ee la xidhiidha dakhligii kulamada”.
“Waxaanu u han waynahay ciyaartoydayada iyo shaqalaha ee isku tagay sidii ay kooxdeena u taageeeri lahaayeen, ee ay dadkeena iyo bulshadeena u taageeri lahaayeen waqtiyadan aan hore loo arag oo ah waqtiyada ugu adag ee aynu taariikhda soo marnay” ayaa qoraalka Arsenal lagu soo xidhay.